Lasa Nahay Namindra Fo i Jona Tany Ninive | Tena Finoana
Lasa Nahay Namindra Fo Izy
1. Tantarao ny dian’i Jona sy izay tsapany.
HANAO dia lavitra 800 kilaometatra mahery ho any Ninive i Jona, ary haharitra iray volana eo ho eo ilay izy, fara fahakeliny. Hanam-potoana hieritreretana tsara izy eny. Tsy maintsy hifidy lalana anefa izy aloha, na ilay manitsy, na ilay lavitra kokoa nefa tsy mampidi-doza. Roso àry ny dia, ka iny izy fa namakivaky lohasaha sy tendrombohitra be dia be. Tsy maintsy nanodidina ny Efitr’i Syria izy sady niampita renirano maro, anisan’izany i Eofrata. Nandalo tany Syria sy Mezopotamia ary Asyria koa izy, ary voatery niangavy olon-tsy fantatra mba hampiantrano azy. Arakaraka ny nanatonany an’i Ninive no nampitebiteby azy hoe inona no hitranga.
2. Nahoana no fantatr’i Jona fa tsy afaka mandositra an’i Jehovah izy?
2 I Jehovah no naniraka an’i Jona, ka fantany tsara hoe tsy afaka miverin-dalana izy fa tsy maintsy mandeha. Efa nandositra mantsy izy teo aloha, saingy nampisy tafio-drivotra i Jehovah mba hanitsiana azy. Nandefa trondro ngezabe hitelina azy i Jehovah avy eo ka tsy maty izy. Naloan’ilay trondro teny amin’ny tany maina izy, telo andro tatỳ aoriana. Tena nampiaiky azy izany rehetra izany, ka tapa-kevitra ny hankatò an’i Jehovah izy.—Jona, toko 1, 2.
3. Inona no nataon’i Jehovah tamin’i Jona, ka tokony mba hanao inona koa i Jona?
3 Rehefa nirahin’i Jehovah àry izy tamin’ ity indray mitoraka ity, dia nankatò ka niantsinanana nankany Ninive. (Vakio ny Jona 3:1-3.) Tena niova tanteraka ve anefa i Jona? Mba nianatra namindra fo ve, ohatra, izy? Izy mantsy namindran’i Jehovah fo, ka tsy nosaziny fa novonjeny sady mbola nirahiny indray. Matetika no sarotra amin’ny olona tsy lavorary ny mamindra fo. Sarotra tamin’i Jona koa izany. Andao àry isika handray lesona avy amin’ny tantarany.
Tsy nampoizina hoe hiova izy ireo
4, 5. Nahoana i Ninive no zava-dehibe tamin’i Jehovah, ary inona no tsapan’i Jehovah amin’ny olona tsirairay?
4 “Tanàna lehibe teo imason’Andriamanitra i Ninive.” (Jona 3:3) Intelo i Jehovah no milaza ao amin’ny bokin’i Jona fa “tanàna lehibe” i Ninive. (Jona 1:2; 3:2; 4:11) Tsy nitovy hevitra tamin’i Jehovah anefa i Jona. Fa nahoana tokoa moa no zava-dehibe tamin’i Jehovah io tanàna io?
5 Tanàna efa ela be i Ninive, satria anisan’ireo tanàna voalohany natsangan’i Nimroda taorian’ny Safodrano. Nidadasika be izy io, ary nisy tanàna kely maro tao anatiny. Nandeha an-tongotra telo andro ny olona vao nahavita namakivaky an’i Ninive manontolo. (Gen. 10:11; Jona 3:3) Nahavariana io tanàna io, satria nisy tempoly tsara tarehy sy manda lehibe ary tranobe hafa. Tsy izay anefa no nahatonga azy io ho lehibe teo imason’i Jehovah fa ny olona tao. Be mponina mantsy i Ninive. Tia an’ireo olona ireo i Jehovah, na dia nanao ratsy aza ry zareo. Ny olona tsirairay mihitsy no tiany, ary fantany fa mbola afaka miova sy miezaka hanao ny tsara.
Tanàna lehibe feno mpanao ratsy no fahitan’i Jona an’i Ninive
6. a) Nahoana i Jona no mety ho natahotra rehefa tonga tao Ninive? (Jereo koa ny fanamarihana ambany pejy.) b) Inona no toetran’i Jona hitantsika eto?
6 Tonga tao Ninive i Jona nony farany. Vao mainka angamba izy natahotra satria nisy mponina 120 000 mahery tao. * Nandeha an-tongotra iray andro maninjitra izy, angamba mba hitady toerana be olona ka nety tsara hitoriana. Dia ahoana izao no hiresahany amin’ireo vahoaka be ireo? Fa angaha izy efa nianatra teny asyrianina? Sa nanao fahagagana i Jehovah mba hahaizany an’ilay fiteny? Sa kosa izy niteny hebreo ihany fa nampiasa mpandika teny? Tsy fantatsika izany, fa ny fantatsika kosa dia nivantana be ilay hafatra, hoe: “Efapolo andro sisa dia horavana i Ninive.” (Jona 3:4) Vaovao ratsy koa ilay izy, fa tsy hoe mahafaly. Sahy namerimberina an’ilay izy anefa i Jona. Hita fa be herim-po sy nanam-pinoana izy, ka modely ho antsika. Tena mila an’ireo toetra ireo mantsy isika Kristianina.
Nivantana be ilay hafatr’i Jona, sady vaovao ratsy fa tsy hoe mahafaly
7, 8. a) Ahoana no nandraisan’ny mponin’i Ninive ny hafatr’i Jona? b) Inona no nataon’ny mpanjaka?
7 Nijanona ny olona mba hihaino an’i Jona. Angamba izy efa niandriandry hoe hasiaka sy hamono azy ry zareo. Nahagaga anefa fa nino ny tenin’i Jona izy ireo! Vetivety dia niely eran’ny tanàna ilay resaka. (Vakio ny Jona 3:5.) Nibebaka sy nifady hanina daholo na manankarena na mahantra, na lahy na vavy, na antitra na tanora. Tsy ela dia tonga tany amin’ny mpanjaka ilay feo.
Nila nanana finoana sy herim-po i Jona mba hitoriana tao Ninive
8 Lasa natahotra an’Andriamanitra koa àry ilay mpanjaka. Niala teo amin’ny seza fiandrianany izy, ka nanala ny akanjom-boninahiny ary nitafy lamba gony hoatran’ny olon-drehetra, sady “nipetraka tamin’ny lavenona.” Namoaka didy koa izy sy ireo “olona ambony” fa ilay firenena manontolo mihitsy no hifady hanina. Nasainy nitafy lamba gony koa ny rehetra, na dia ny biby fiompy aza. * Nanetry tena izy ka niaiky fa meloka ny vahoakany, satria nanao ratsy sy nahery setra. Nanantena izy fa hamindra fo Andriamanitra rehefa mahita azy ireo mibebaka. Hoy izy: ‘Sao mba tsy hirehitra intsony ny fahatezeran’Andriamanitra, dia tsy ho faty isika.’—Jona 3:6-9.
9. Inona no lazain’ny mpanakiana, nefa nahoana izy ireo no diso?
9 Misy manakiana hoe olona ratsy toetra be hoatran’izany ve dia hibebaka tampoka eo. Milaza anefa ny manam-pahaizana momba ny Baiboly fa mora miova hevitra sy minomino foana ny olona fahiny. I Jesosy Kristy mihitsy koa no niteny fa nibebaka tokoa ny mponin’i Ninive. (Vakio ny Matio 12:41.) Nahita an’io zava-nitranga io avy tany an-danitra mantsy izy. (Jaona 8:57, 58) Tsy tokony tonga dia hieritreritra àry isika hoe tsy hibebaka mihitsy ny olona iray, na dia ratsy toetra toy inona aza. I Jehovah ihany no mahalala ny ao am-po.
Hamindra fo sa ho mafy fo?
10, 11. a) Ahoana no nataon’i Jehovah rehefa nibebaka ny mponin’i Ninive? b) Tsy nety ve ilay didim-pitsaran’i Jehovah? Hazavao.
10 Dia ahoana no nataon’i Jehovah rehefa nibebaka ny mponin’i Ninive? Hoy ny Jona 3:10: “Hitan’ilay tena Andriamanitra ny nataon’izy ireo, fa niala tamin’ny lalan-dratsiny izy ireo. Koa nanenenan’Andriamanitra ilay loza nolazainy hamelezany azy, ka tsy nampihariny indray.”
11 Midika ve izany fa lasa nahatsapa i Jehovah hoe tsy nety ilay didim-pitsarana nolazainy momba an’i Ninive? Tsy izany, satria milaza ny Baiboly fa tonga lafatra daholo izay ataony sady tena ara-drariny. (Vakio ny Deoteronomia 32:4.) Rariny raha tezitra tamin’ny mponin’i Ninive i Jehovah tamin’ny voalohany. Tsy tezitra intsony anefa izy avy eo. Hitany mantsy fa niova izy ireo ka tsy mila sazina intsony. Naleony àry namindra fo.
12, 13. a) Ahoana no nampisehoan’i Jehovah fa mahay mandanjalanja sy mamindra fo izy? b) Nahoana i Jona no tsy hoe naminany lainga?
12 Tsy Andriamanitra mafy fo sy masiaka be i Jehovah, na dia misy aza mieritreritra an’izany noho ny zavatra ampianarin’ny mpitondra fivavahana. Mahay mandanjalanja sy mamindra fo kosa izy. Tsy tonga dia manasazy izy fa maniraka ny mpanompony aloha mba hampitandrina ny mpanao ratsy. Tiany mantsy raha mibebaka sy miova toy ny mponin’i Ninive izy ireny. (Ezek. 33:11) Hoy i Jehovah tamin’i Jeremia mpaminany: “Rehefa manameloka firenena na fanjakana aho, ka mikasa hanongotra sy handrodana ary handrava azy, nefa miala amin’ilay faharatsiana nanamelohako azy ilay firenena, dia hanenenako ny loza noeritreretiko hamelezana azy.”—Jer. 18:7, 8.
Tian’i Jehovah hibebaka sy hiova toy ny mponin’i Ninive ny mpanao ratsy
13 Naminany lainga ve izany i Jona satria tsy horavana indray i Ninive? Tsia, satria natao hampitandremana ny olona ilay hafatra, ary nibebaka tokoa ry zareo. Raha miverina manao ratsy indray anefa izy ireo, dia hiharan’ny didim-pitsaran’Andriamanitra ihany. Ary izany no nitranga tatỳ aoriana.—Zef. 2:13-15.
14. Nanao ahoana i Jona rehefa namindra fo tamin’i Ninive i Jehovah?
14 Nanao ahoana i Jona rehefa tsy noravana indray i Ninive tamin’ilay andro nolazainy hoe handravana azy? Hoy ny Jona 4:1: ‘Tsy nahafaly an’i Jona mihitsy izany, ka nirehitra ny fahatezerany.’ Hoatran’ny nibedy an’Andriamanitra mihitsy aza izy tamin’ny vavaka nataony! Tahaka izay, hono, izy nijanona tany amin’ny taniny, satria efa fantany hatramin’ny voalohany fa tsy handringana an’i Ninive akory i Jehovah. Nolazainy aza fa izany no antony nandosirany tany Tarsisy. Niteny mihitsy izy avy eo hoe aleony maty toy izay velona.—Vakio ny Jona 4:2, 3.
15. a) Inona no mety ho nahasosotra an’i Jona? b) Inona no nataon’i Jehovah?
15 Fa inona no nahasosotra an’i Jona? Asa aloha izay tena tao an-tsainy fa nasaina naminany loza tamin’ny mponin’i Ninive izy, kanjo tsy nisy indray ilay loza. Nino azy daholo mantsy ry zareo ka niova. Natahotra angamba i Jona hoe hesoesoin’ny olona na holazaina fa mpaminany sandoka. Tsy faly mihitsy izy na dia nibebaka sy namindran’i Jehovah fo aza ilay vahoaka. Angamba koa izy nahatsiaro ho afa-baraka, ary ny tenany indray no nampalahelo azy. Andriamanitra mamindra fo anefa i Jehovah, ka mbola nahita toetra tsara taminy ihany. Tsy nosaziny àry i Jona na dia tsy nanaja azy aza. Nalemy fanahy taminy kosa izy ka nampisaintsaina azy hoe: “Rariny ve raha tezitra mafy toy izao ianao?” (Jona 4:4) Asa anefa raha namaly akory i Jona satria tsy milaza izany ny Baiboly.
16. Inona no mety hoeritreretintsika rehefa misy zava-dratsy, nefa inona no ianarantsika avy amin’ny tantaran’i Jona?
16 Mety tonga dia hanome tsiny an’i Jona isika. Tadidio anefa fa tsy i Jona ihany no mety tsy hitovy hevitra amin’Andriamanitra, fa isika rehetra koa satria tsy lavorary daholo isika. Ahoana, ohatra, rehefa misy loza na misy olona manao zava-dratsy be? Mety hieritreritra ianao hoe: ‘Maninona i Jehovah no tsy nanao na inona na inona?’ Na hoe: ‘Maninona no mbola tsy ringaniny foana ity tontolo ratsy ity?’ Hita avy amin’ny tantaran’i Jona anefa fa rehefa tsy mitovy hevitra amin’i Jehovah isika, dia isika foana no diso fa tsy i Jehovah mihitsy.
Nampianatra an’i Jona i Jehovah
17, 18. a) Inona no nataon’i Jona rehefa niala tao Ninive? b) Inona avy ny vokatr’ireo fahagagana roa, teo amin’i Jona?
17 Kivikivy i Jona niala tao Ninive. Tsy nody anefa izy fa lasa niantsinanana. Niakatra tendrombohitra izy ary nanamboatra fialofana kely. Nipetraka teo izy sady nitazana an’i Ninive. Mbola nanantena angamba izy hoe haringana ilay tanàna. Mbola mafy fo ihany i Jona! Ahoana àry no hampianaran’i Jehovah azy hamindra fo?
18 Nampaniry voatavomonta i Jehovah ny alin’io. Vao nifoha i Jona, dia zavamaniry nandrobona be no hitany. Lehibe ny ravin’ilay izy ka nanome alokaloka tsara, fa tsy toy ilay fialofana kely namboariny. Faly erỳ i Jona. Nihevitra angamba izy fa nankasitraka sy nitahy azy i Jehovah matoa nanao an’io fahagagana io. Tsy hoe te hanambitamby sy hanome alokaloka an’i Jona fotsiny anefa i Jehovah, fa te hanohina ny fony. Nanao fahagagana fanindroany àry izy, ka naniraka kankana mba hamono an’ilay zavamaniry. Nampisy “rivotra mahamay avy any atsinanana” izy avy eo, ka saika safotra mihitsy i Jona. Tezitra àry i Jona, ka niteny indray hoe aleony maty.—Jona 4:6-8.
19, 20. Ahoana no nampisaintsainan’i Jehovah an’i Jona?
19 Nanontany indray i Jehovah hoe: ‘Rariny ve raha tezitra ianao noho ilay voatavomonta?’ Mbola tsy nanaiky diso ihany i Jona fa nanamarin-tena hoe: “Rariny tokoa raha tezitra mafy toy izao aho! Aleoko mihitsy maty.” Nanarin’i Jehovah amin’izay àry izy.—Jona 4:9.
Nampiasa voatavomonta i Jehovah mba hampianarana an’i Jona hamindra fo
20 Nampisaintsainin’i Jehovah izy hoe zavamaniry kely iny ve dia mampalahelo azy, nefa tsy izy akory no namboly sy nampitombo azy. Ilay izy koa velona indray alina monja, dia maty ny ampitso ihany. Nanontany i Jehovah nony farany hoe: “Izaho ve tsy mba halahelo an’i Ninive, ilay tanàna lehibe misy olona maherin’ny roa alina sy iray hetsy izay tsy mahalala akory ny havia sy havanany, ary misy biby fiompy maro koa?”—Jona 4:10, 11. *
21. a) Inona no tian’i Jehovah hampianarina an’i Jona? b) Nahoana isika no tokony handini-tena?
21 Azonao ve hoe inona no tena tian’i Jehovah hampianarina? Nalahelo erỳ i Jona rehefa maty ilay voatavomonta, nefa tsy izy akory no nampaniry azy. Dia i Jehovah ve tsy mba halahelo ny mponin’i Ninive nefa izy no nanome aina sy nikarakara azy ireo, toy ny ataony amin’ny zavaboary hafa? Ilay zavamaniry indray no sarobidy kokoa tamin’i Jona, fa tsy ireo olona 120 000 sy ny biby fiompy rehetra. Tsy tia tena kosa ve izy amin’izany? Tsy ho nalahelo an’ilay zavamaniry mantsy izy, raha tsy nahasoa azy ilay izy. Tsy vitan’izay fa tezitra be izy rehefa tsy noravana i Ninive. Tsy te ho afa-baraka angamba izy, fa te ho hita hoe nilaza ny marina. Mila mandini-tena àry isika sao dia manao hoatran’i Jona. Tsy lavorary mantsy isika, ka mety ho lasa tia tena. Soa ihany fa manam-paharetana i Jehovah ka mampianatra antsika tsy hanana an’io toetra ratsy io, fa hangoraka sy hamindra fo toa azy.
22. a) Ahoana no ahafantarantsika fa nanaiky hahitsin’i Jehovah i Jona? b) Inona ny toetra tokony hianarantsika rehetra?
22 Nanaiky hahitsin’i Jehovah ve i Jona? Marina fa tapitra eo amin’ilay fanontanian’i Jehovah ny bokin’i Jona. Mety hisy hanakiana àry hoe tsy novalian’i Jona mihitsy ilay izy. Voaporofo anefa fa izy no nanoratra an’ilay boky, ka midika izany fa nanaiky ny tenin’i Jehovah izy. Alao sary an-tsaina hoe efa tafaverina soa aman-tsara tany amin’ny taniny izy, ary teo am-panoratana azy io. Efa be taona kokoa sy nihahendry ary nanetry tena izy tamin’izay. Nosoratany tao daholo ny fahadisoany, sy ilay izy nikomy sady tsy nety namindra fo. Angamba izy nieritreritra hoe: ‘Ity izaho dia nahavita an’izany!’ Tena nihaino ny anatr’i Jehovah i Jona, ka lasa nahay namindra fo. Hanahaka azy ve ianao?—Vakio ny Matio 5:7.
^ feh. 6 Voalaza fa 20 000 na 30 000 teo ho eo ny mponin’i Samaria, renivohitr’i Israely, tamin’ny andron’i Jona. Indimin’izay eo ho eo anefa ny mponin’i Ninive. Izy io angamba no tanàna be olona indrindra teto an-tany, tamin’ny fotoana nampandroso be azy.
^ feh. 8 Hoatran’ny hafahafa izany, nefa efa fanaon’ny olona taloha. Nilaza, ohatra, i Hérodote, Grika mpahay tantara, fa nasaina nisaona koa ny biby rehefa nodimandry ny jeneraly iray tiam-bahoaka tany Persa fahiny.
^ feh. 20 Tsy nahalala mihitsy ny fitsipik’Andriamanitra ny mponin’i Ninive. Izay no dikan’ilay hoe tsy mahalala ny havia sy havanany.
Inona no nataon’i Jona, ka ahitana fa nanam-pinoana sy be herim-po izy?
Nibebaka ny mponin’i Ninive. Inona no ianarantsika avy amin’izany?
Nanao ahoana i Jona rehefa nibebaka ny olona, ary inona no ianarantsika avy amin’izany?
Inona no tokony hataontsika rehefa anarina, raha jerena ny tantaran’i Jona?
Hizara Hizara Lasa Nahay Namindra Fo Izy